ဒါဂတ်စကာ၏အံ့သြဖွယ်ကျွန်းတစ်အားလပ်ရက်စီစဉ်သောအခါ, သင့်လျော်သောအဆင့်ကိုချက်ချင်းညှိဖို့, kachesvom ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဒေသတွင်းတခြား features တွေနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်လိုအပ်သောကြိုတင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဝါရင့်ခရီးသွားမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင်ပိုကောင်းတဲ့ဝယ်ဖို့ချင်ပါတယ် အထုပ်ခရီးစဉ် ။
ဒါဂတ်စကာတစ်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးရာသီမေလနှင့်အောက်တိုဘာလအကြားဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု, ဒီထက်မိုးရွာရွာရေတံခွန်နှင့်ဆောင်းတွင်းလအတွင်းထက်ပိုမိုတိတ်ဆိတ်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ပါဘူး, ဤလအတွင်းကျွန်းပေါ်တွင်သတ်မှတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဂတ်စကာအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဟာယေဘုယျအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်ခံခဲ့သည်ကနေသိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။ ပေးနှစျသိမျ့ဟိုတယ်တည်ရှိရာအရပ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးအပန်းဖြေစခန်းဧရိယာသို့မဟုတ်မြို့တော်၌တည်ရှိ၏လျှင်သင်န်ဆောင်မှုများနှင့်အဆင်ပြေနေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုဝေးလံသောကျေးရွာများတွင်ခရီးသွားဧည့်များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်မျှသာသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူအသေးဘန်ဂလိုသို့မဟုတ်အိမ်များတွင်ချထားပါသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်နှာခေါင်းကြီးသော-Be (နှာခေါင်းကြီးသော-Bi) နှင့်စိန့်မာရိသညျ (Ile Saint-Marie) ၏ကျွန်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားသောအရပ်တို့ကိုမက၎င်း၏လှပသောသဲကမ်းခြေနှင့်အဆင်ပြေဟိုတယ်များအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။ Tulear, Morondava, ambohimanga, Antsirabe: အပြင်အများအပြားအပန်းဖြေနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။
ဒါဂတ်စကာ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုက၎င်း၏ထူးခြားသောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူမမျက်နှာကို ထောက်. ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်များစွာသောထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောခရီးကိုသွားပါ။ နီးပါးကျွန်းတစ်ခုလုံးကိုနယ်မြေတစ်ဦးသဘောသဘာဝအရံဖြစ်ပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးကသဘာဝဥယျာဉ် Isale, Pierina De-Ranomafana, Montagne မှာ d'Ambra ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်းရဲ့မြို့တော်အပြင် - Antananarivo ၏မြို့, သင်က၎င်း၏သမိုင်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျသညျ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကအများအပြားအလယ်ခေတ်အဆောက်အဦးစောင့်မတော်မူ၏။ ဘုံဗိမာန် Ruva Ambuhimanga သောမင်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏သင်္ချိုင်းပါဝင်သည်ဟု၏လူကြိုက်အများဆုံး ensemble ။
ဒါဂတ်စကာ - တစ်ကားငှားရမ်း
တန်ဇန်းနီးယား - ဆွဲဆောင်မှုများ
Oat အလွှာထဲကနေ pancakes
Oregano - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရိုးရာဆေးပညာတွင်အသုံးပြု
ဆင့်ဆိုရမည်မှာလူနေမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်: TOP-20 အရှိဆုံးရယ်စရာသေဆုံးမှု
ဒါကြောင့်တစ်ဦးသူနာပြုမိခင်အား Jamming ဖို့ဖြစ်နိုင်မလား?
Sansevera - စောင့်ရှောက်မှု
အဆိုပါ battens အိမ်ထဲဆေးထိုးခြင်း,
Scarlett Johansson ကွာရှင်းလိုသည်နှင့်ဟောလိဝုဒ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့လိုသည်